निषेधाज्ञाविरुद्ध नीजिक्षेत्रको अवज्ञा नीति NewsButwaltoday
आश्विन ९ २०७७ | 2020 Sep 25
निषेधाज्ञाविरुद्ध नीजिक्षेत्रको अवज्ञा नीति
छवि पाण्डे बुटवल
लकडाउन र निषेधाज्ञाको करिव ६ महिना लामो श्रृंखला अझैपनि जारी छ । कतै आंशिक त कतै केही खुकुलो लकडाउन र निषेधाज्ञाले नेपालको आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको छ । उद्योगी व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार निषेधाज्ञा बढाउन चाहन्छ तर नीजि क्षेत्रले अव कुनैपनि नामको निषेधाज्ञा स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ । नीजि क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार र स्थानीय प्रशासन तथा पालिकाहरु केही पछि हटेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ– लकडाउन र निषेधाज्ञाका नाममा जारी बन्दले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । व्यवसाय सञ्चालनको पनि वाताबरण छैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनैपनि नाममा कर छुट दिएको छैन । बरू जरिवाना लगाउने श्रृंखला बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिको पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले अन्ततः लकडाउन वा निषेधाज्ञा स्वीकार नगर्ने घोषणा गरे ।
सरकारले प्रशासन लगाएर बन्द गर्न आदेश दिए अवज्ञा गर्ने प्रतिकृया दिए । यो विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बेला सरकार उनीहरूलाई चिढाउन सक्दैन्थ्यो र अहिले निषेधाज्ञाका नाममा भैरहेको बन्द खुकुलो भएको छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको वाताबरण तयार भएको छ । कोरोनाका नाममा भैरहेको बन्दको अराजकता अन्त्य गर्नै पर्दछ, यो उद्योगी व्यवसायीको दवाव थियो । निश्चितरूपमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ तर यसको नियन्त्रण बजार बन्द गरेर होइन, उद्योग व्यवसाय धराशायी गराएर होइन, हजार विकल्पको विषयमा सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् ।
धेरैपछि भएपनि सरकारका तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीको धारणा बुझ्ने काम भएको छ । अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि अहिले अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएर उनीहरुको समस्या, पीरमर्का र कोरोनाको बीचबाट जान सकिने विकल्पको बाटोको विषयमा भलाकुसारी गर्नुभएको छ । निश्चितरुपमा राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो प्रयासको लागि धन्यबाद दिनै पर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट भएको पहलको सराहना गरेका छन् तर छलफलबाट प्राप्त भएको उपलव्धिका विषयमा भने उद्योगी व्यवसायीले निरासा व्यक्त गरेका छन् । खासगरी कोरोना कहरका बीचमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वाताबरण तयार गर्न उद्योगी व्यवसायीले दवाव दिएका छन् ।
उनीहरुले सरकारका तर्फबाट ठोस राहतको माग समेत गरेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएका छन् राहत पाएका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसाय पनि धरासायी भएको प्रतिकृया दिएका छन्् । निश्चितरुपमा उद्योग ठप्प भएपछि उत्पादन शून्य छ । उत्पादन शून्य भएपछि सामानको अभावमा व्यवसायमाथि असर परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ– अव कुनैपनि अवस्थामा उद्योग वन्द गराउने बाताबरण नहोस् । त्यो भयो भने त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र होइन, स्वयं सरकारलाई समेत ठूलो घाटा हुनेछ । सरकारले दैनिक खर्च चलाउन राजस्व संकलनमा नयाँ जुक्ति निकालीरहेको छ । तर, जसले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहज वनाएका छन् उनीहरुप्रति राज्य अनुदार भैरहेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।
लकडाउनको प्रभाव मुलुकका हरेक क्षेत्रमा परेको छ । रोजगारी गुमेको छ । विदेशबाट स्वदेश फर्किनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ जसका कारण रेमिटान्स घट्ने ठूलो चिन्ता छ । सरकारकै लागि कर संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिव २० प्रतिशतको योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्र विगत ६ महिनादेखि बन्द हुँदा उक्त क्षेत्रमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारले ओरालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न दिनुपर्ने राहतमा कुनै चासो नदिँदा यो क्षेत्र थप धराशायी हुने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ सरकार आफै खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा छ । राज्यको ठूलो करको श्रोत रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भ्याट विवरण र विवरण अनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ भने भ्याटमा सहभागी करदातामध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीले भ्याट नबुझाएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको माघमा १ लाख ९३ हजारले भ्याट विवरण बुझाएका थिए । त्यसपछि लकडाउनका कारण चैत, वैशाख र जेठमा करदाता घटे भने असारमा १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए जसका कारण सरकार राजस्व संकलनमा असफल जस्तै भएको छ । राज्यले पाउने अर्बाैं राजस्व गुमेपछि सरकारको खर्चमा भारी कटौती भएको छ । अनियमित खर्च कटौती स्वाभाविक भएपनि कर घट्दा विकासमा पर्ने प्रभावबाट कसरी मुलुकलाई माथि उठाउने भन्ने चिन्ता छ । यस्तो चिन्तावीच प्रधानमन्त्री आफैले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेर कतै गल्ती त गर्नुभएको छैन भन्ने बहस पनि आरम्भ भएको छ । जेहोस् अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमनपछि मुलुकको आर्थिक कार्यदिशामा सरकारले लिने नीति र आगामी भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय निक्र्यौल हुनैपर्दछ ।
उद्योग व्यवसाय खोल्ने विषयमा पछिल्लोपटक उद्योगीहरुले लिएको अडान र रणनीति स्वाभाविक छ । रुपन्देही उद्योग व्यापार संगठनले कुनैपनि नाममा जारी हुने निषेधाज्ञा स्वीकार नगर्ने चेतावनी नै दियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतले संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरेर निषेधाज्ञाको विकल्प निषेधाज्ञा हुन सक्दैन भन्दै बजार खोल्नुपर्ने अडान राखे । निश्चितरुपमा उद्योगी व्यवसायीले केन्द्र र जिल्लातहबाटै सरकारलाई जुन दवाव दिएका छन् त्यसबाट बजार सञ्चालनमा सहज भएको छ । देशका ठूला उद्योगीले उद्योग चलिरहेपनि बजार बन्द भएका कारण आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको भन्दै केन्द्रतहमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन दवाव दिए । उद्योगी व्यवसायीले लिएको दवाव र रणनीतिका विषयमा बहस नभएपनि अव सदाका लागि कुनैपनि नामको लकडाउन र निषेधाज्ञा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । लामो लकडाउनले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सवैभन्दा तल्लो वर्ग श्रमिक मजदुर ठूलो मारमा परेका थिए । अहिले निषेधाज्ञा सहज भएपछि त्यो क्षेत्रपनि उत्साहित भएको छ । कम्तीमा पनि श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने आधार तयार भयो भने त्यसबाट धेरै ठूलो राहत पुग्छ । केन्द्र र स्थानीय तहले लकडाउनले प्रभावितहरुलाई राहत वितरण वन्द गरिसकेको अवस्थामा रोजगारीको विकल्प खुल्ला गर्नुपर्ने थियो । दवावबाटै भएपनि त्यो संभव भयो अव निर्माणको कामले तीव्रता पाउनुपर्दछ ।
अन्त्यमाः निषेधाज्ञा जारी राख्ने र हटाउने विषयमा सरकार र नीजि क्षेत्रबाट भएको आ–आफ्नो अडान र बहस स्वाभाविक थिएन । त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने टकरावले चिन्ता बढाएको थियो । मुलुक नै संकटोन्मुख भएको बेला नीजि क्षेत्र आन्दोलनमा आउनु निश्चितरुपमा देशकै लागि दुर्भाग्य हुने थियो । त्यसले सरकार र नीजि क्षेत्रबीचको दुरी झनै फराकिलो पार्ने अवस्था देखापर्दै थियो । अन्ततः सरकार र नीजि क्षेत्र दुवै सहमतिमै आए । निषेधाज्ञा खुकुलो वनाउने नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार नगरिने सरकारको अडान र सामाजिक दुरी कायम गरेरै तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार खोल्ने नीतिमा अडिग नीजि क्षेत्र सहमतिको एउटै विन्दुमा आएका छन् । बजार खोल्दैमा मुलुक कोरोना ‘हटस्पट’ वन्ने होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी थियो । निश्चितरुपमा निषेधाज्ञाको करिव दुई साताको देशकै तथ्याँक वा प्रदेश ५ को तथ्याँक हेर्ने हो भने पनि निषेधाज्ञा खुल्ला गर्दैमा कोरोना संक्रमण भुसको आगो जसरी बढेको छैन बरु पहिलेभन्दा कमै छ । तसर्थ सरकारले अव जारी गर्ने कुनैपनि प्रकारको लकडाउन वा निषेधाज्ञा स्वीकार हुन सक्दैन । नीजि क्षेत्र त्यसैपनि प्रभावित भएको अवस्थामा विकल्पमाथि बहस जरुरी थियो । अव सामाजिक दुरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्ने र समृद्धिको लागि गोरेटो निर्माण गर्ने दिशामा सवैको ध्यान जाओस् ।
अपडेट : 2020-09-13 11:09:40
पहिरोः प्राकृतिक र मानवीय विपद
'एकादेशको' कृषि प्रधान देश
बुटवलमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
तिनाउले एक घर बगायो, तीन घर खतरामा
दह खोलाको पहिरोले गोरुसिंङ्गे सन्धिखर्क सडक अबरुद्द
तिनाउ नदीले बाढीको खतरा तह नाध्यो
पहिरोको कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अझै खुलेन
पाल्पाको रम्भामा पहिरो, ६ जना वेपत्ता
मुख्य खबर थप समाचार
प्रबन्ध सञ्चालक / प्रबन्ध सम्पादक
डा. सूर्य राना
बुटवल पब्लिकेशन प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित “बुटवल टुडे” राष्ट्रिय दैनिक को सह–प्रतिष्ठान अनलाईन संस्करणnewsbutwaltoday.com , (न्यूज बुटवल टुडे डट्. कम्. )हो । हो ।प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलबाट प्रकाशित यो दैनिक पत्रिका निरन्तर नेपाल सरकार प्रेस काउन्सिल नेपाल द्वारा “राष्ट्रिय स्तरको क वर्ग” मा सूचिकृत हुदै आएको छ ।देशैभरीका पत्रिकाहरु मध्ये पहिलो पटक नेपाल सरकार प्रेस काउन्सिलले ‘उत्कृष्ट आचार संहिता पत्रकारिता पुरस्कार–२०७३’ बाट बुटवल टुडे दैनिक पुरस्कृत पत्रिका हो ।
सूचना विभाग दर्ता नं. १०८/२०७५-०७६
नेपाली राष्ट्रिय दैनिक बुटवल टुडे
प्रधान कार्यालय बुटवल–८ तिलोत्तमा पथ रुपन्देही
[email protected] (विज्ञापन मात्र)
[email protected](समाचार मात्र)
[email protected](अनलाइन समाचार)
Copyright © 2018 . Butwal Today Publications
Site By Webroot Multipurpose